Land Info. | eTanitharyi
Home » Land Info.
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးသည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၉)ဒီဂရီ (၅၈)မိနစ်နှင့် (၁၅)ဒီဂရီ (၆)မိနစ်အကြား၊ အရှေ့လောင် ဂျီတွဒ် (၉၇)ဒီဂရီ (၄၆)မိနစ်နှင့် (၉၉)ဒီဂရီ (၄၀)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သည် ဧရိယာစတုရန်းမိုင်(၁၆၇၃၅.၅၆)မိုင်၊ (၁၀၇၁၀၇၅၇)ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာ၏ (၆.၃၇%)ခန့် ရှိပါသည်။ တောင်မြောက်ရှည်လျားပြီး အရှေ့အနောက်ကျဉ်းမြောင်းပါသည် -
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ အရှေ့ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မြောက်မှ တောင်သို့ အကွေ့အကောက် အတိုင်း(၄၂၅)မိုင်ခန့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျောက် မြေမျက်နှာပြင်တည်နေအထားအတိုင်း (၅၅၀)မိုင်ခန့်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် မွန်ပြည်နယ်နှင့် အရှေ့မှ အနောက်သို့ (၄၄)မိုင်ခန့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း၊ တောင်စွယ် ပေါများပြီး အနောက်ဘက်တွင် ကပ္ပလီပင်လယ်ရှိ၍ အရှေ့ဘက်၌ တနင်္သာရီ တောင်တန်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကြောင့် ကမ်းရိုး တန်းလွင်ပြင်မှာ ကျဉ်းမြောင်းသည်။ တနင်္သာရီတောင်တန်းသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အပြိုင် တည်ရှိပါသည်။ ထားဝယ်မြစ်နှင့်တနင်္သာရီမြစ်တို့၏ ရေဝေကုန်းတန်း (Water Sheet)အဖြစ် တည်ရှိပြီး ထားဝယ်လွင်ပြင်နှင့် မြိတ်လွင်ပြင်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အမြင့်ပေ(၅၀)အောက် နိမ့်ဆင်းသွားသော လွင်ပြင်များ ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် ကမ်းလွန်ပြင်၌ ကျွန်းပေါင်း (၈၄၀) ကျွန်းရှိပြီး တနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ အင်းတော်ကြီးအင်းမှာ ထင်ရှားပြီး ရေတံခွန်ငယ်များ ရေပူစမ်းများ အမြောက်အမြားရှိပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြစ်ချောင်းများပေါများသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြစ်ချောင်းများသည် မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ထင်ရှားသောမြစ်မှာ ထားဝယ်မြစ်၊ တနင်္သာရီမြစ်နှင့်ပါချန်မြစ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္သာရီမြစ်သည် ဂန်းချောင်းနှင့်ခမောင်းသွယ်ချောင်းတို့ ပေါင်းဆုံပြီး မေတ္တာမြို့မှ စတင်မြစ်ဖျားခံ၍ စီးဆင်းလာပြီး နွေရာသီတွင် သင်္ဘောများမသွားလာနိုင်ပါ။ ပါချန်မြစ်သည် ကော့သောင်းမြို့အနီးမှဖြတ်၍ မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းပြီး နွေရာသီတွင် ရေအနက်(၁၀၀)ပေ အထက်ရှိ၍ သင်္ဘော/စက်လှေများ ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ပါသည်။ ထားဝယ်မြစ်သည် ရေဖြူမြို့နယ်မှစ၍ ထားဝယ်မြစ်ဝအထိ မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ထားဝယ်မြစ်သည် နွေရာသီတွင် သင်္ဘောကြီးများ သွားလာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပျှမ်းမျှအမြင့်ပေ (၄၀၀) ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်မှာ မြင့်မိုရ်လက်ခတ်တောင်ထွတ် (၆၈၀၁)ပေဖြစ်၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်(၃၀၀)​ပေမြင့်ပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ အနိမ့်ဆုံးအရပ် ဒေသမှာ ထားဝယ်မြို့ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်ပေ(၅၀)ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ထားဝယ်လွင်ပြင်နှင့် မြိတ်လွင်ပြင်မှာ အနိမ့်ဆုံးအပိုင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုရှိပြီး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၃၄.၅.C)နှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၁၉.၈.C) ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်အလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးရေချိန်နှင့်အပူချိန်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါသည်-
၆ ၂၀၁၆ ၁၄၅ ၁၇၈.၇၄ ၃၈.၇ ၁၃.၅
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပေါက်ရောက်သည့် သဘာဝပေါက်ပင်များမှာ ရတနာတန်းဝင်အပင်ဖြစ် ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ သင်္ဃန်း၊ သော်ကကြီးစသည့် အပင်များ အလေ့ကျပေါက်ရောက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကညင်၊ ကဒွတ်၊ စံကား၊ ကရဝေး၊ မှန်သင်း၊ ပျဉ်းမ၊ သစ်ခါး၊ ကံ့ကော်၊ တောသရက်၊ သပြေတို့ ပေါက်ရောက်ပြီး ဒီရေတောများတွင် လမု၊ သပြု၊ ဗြူးခြေထောက်၊ ဗြူးဥကလုံး၊ မဓမ၊ လမဲ့စသည့် အပင်များကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တွေ့ရသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များမှာ ကြံ့သူတော်၊ သမင်၊ ဆင်၊ ကျား၊ တောဆိတ်၊ တောင်ဆိတ်၊ မျောက်၊ ဖျံ၊ သင်ခွေချပ်၊ မိကျောင်း၊ လိပ်၊ မြွေနှင့် ငှက်မျိုးစုံ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် သစ်တောဖုံးလွှမ်းဧရိယာ (၆၄.၉၉%) ရှိပြီး၊ သစ်တောကြိုးဝိုင်း ဧရိယာ(၃၃၈၇၅၅၁.၇၇)ဧက ရှိပါသည်။ သစ်တောကြိုးဝိုင်း(၄၄)ခုရှိပါသည်။ လူဦးရေတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ သစ်တောကြိုးဝိုင်းဧရိယာများအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် သစ်တောဧက (၄.၆) သိန်းခန့် ပျက်စီးမှု ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ ပါချန် ကြိုးဝိုင်းတွင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး သစ်တောဧက (၄.၆) သိန်းကျော်ခန့် ပျက်စီးလျက်ရှိနေပါသည်။ အခြားသစ်တောများတွင်လည်း အဖိုးတန် သစ်မျိုးများ ရှားပါးလာပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော/သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးအတွက် ကြိုးဝိုင်းသစ်တော (၂၉၇၁၃၀၂.၈၁)ဧက၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ် တော(၄၁၆၂၄၈.၉၆)ဧကနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ (၆၂၆၈၈.၆၉)ဧကတို့ကို ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးစိုက်ခင်း (၁၀၃၉၂.၆၅)ဧက၊ ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်း (၂၃၂၇.၈၅)ဧက၊ ကျေးရွာ ပိုင်ထင်းစိုက်ခင်း(၆၀)ဧက တည်ထောင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း(၃)ပင်၊ ပျဉ်းကတိုး (၃)ပင်၊ သစ်မာ(၂၀)ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အစီရင်ခံသည့်ကာလအထိ သစ်မာ(၃၀၀၀၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် မိုးရွာသွန်းမှုများသောဒေသဖြစ်သော်လည်း သဘာဝဘေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ဆိုးဝါးစွာ ကျရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ရေဘေးအများဆုံးကြုံတွေ့ရသော တနင်္သာရီ မြို့နယ်သည် ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လများ၌ မိုးသည်းထန်သောရက်နှင့်ဒီရေတက်ရက်ကြုံ တွေ့ရသော ရက်များတွင် ရေဘေးဖြစ်ပွားလေ့ရှိခြင်း၊ရေဘေးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောရေကာနံရံများနှင့် မြစ်ချောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ရေဘေးအန္တရာယ်အား အထိုက်အလျောက် ကျော်လွှား နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်မတ်လရှိ မိုးနှောင်းကာလများတွင် လေဘေးဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး တောင်ပြိုဘေးနှင့်မြေပြိုဘေးမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများပြီး မြေကြီးခိုင်မာမှုမရှိသော တောင်ဆင်ခြေလျော များတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် ၂၀၁၆ခုနှစ်အထိ လေမုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်မှု၊ ဆူနာမီရေလှိုင်းရိုက်ခတ်မှု၊ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု မီးလောင်မှုတို့ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
သေ/​ပျောက် ဦး ရေ
အဆောက် အဦးပျက်စီး မှု
ဆုံးရှုံး မှုတန်ဘိုး (ကျပ်သန်း)
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၁၂၉၂၉၃ ၁၅၂၁၀၃ ၂၈၁၃၉၆ ၁၀၂၄၀၀ ၉၈၀၉၉ ၂၀၀၄၉၉ ၂၃၁၆၉၃ ၂၅၀၂၀၂ ၄၈၁၈၉၅
၁၈၄၈၆၈ ၁၉၀၆၉၄ ၃၇၅၅၆၂ ၁၄၃၅၆၂ ၁၄၄၀၈၄ ၂၈၇၆၄၆ ၃၂၈၄၃၀ ၃၃၄၇၇၈ ၆၆၃၂၀၈
ကော့သောင်း ၅၀၃၈၄ ၄၆၅၃၉ ၉၆၉၂၃ ၃၈၈၇၈ ၃၄၈၆၃ ၇၃၇၄၁ ၈၉၂၆၂ ၈၁၄၀၂ ၁၇၀၆၆၄
တိုင်းဒေသကြီးချုပ် ၃၆၄၅၄၅ ၃၈၉၃၃၆ ၇၅၃၈၈၁ ၂၈၄၈၄၀ ၂၇၇၀၄၆ ၅၆၁၈၈၆ ၆၄၉၃၈၅ ၆၆၆၃၈၂ ၁၃၁၅၇၆၇
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၇ခုနှစ် လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျားမအချိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျား၊ မအချိုး
၂၈၉၈ ၁.၆၉ ၈၉၂၆၂ ၈၁၄၀၂
မူလ လူ ဦးရေ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ရက်
နိဒါန်း နှင့် ဒေသသမိုင်း
အိမ်‌ခြေ ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ
လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့် ကျား/မ အချိုး
(က) လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျား/မ အချိုး
( ခ) မွေးဖွား၊သေဆုံး၊ပြောင်းဝင်၊ပြောင်းထွက်လူဦးရေ
( ဂ) တာတမံများ/ရေထိန်းတံခါးများ
(ဃ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ သုံးစွဲမှုအ‌ခြေအနေ
(ဆ) ရေချို၊ ရေငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ အသားထုတ်လုပ်မှု
(က) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အရောင်းဆိုင်များ
( ခ ) မိုတယ်၊အင်း၊ တည်းခိုခန်း
( ဂ )) ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေနေရာ
(က) ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ပွဲရုံ၊ဈေးနှင့်ကုန်တိုက်များ
( ခ ) ဘဏ်များ
( ဂ ) စတိုးဆိုင်နှင့်အရောင်းဆိုင်များ
( ခ )သောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်း
( ဂ )သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း
(က) ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနှင့် တေးသံသွင်း၊ ဗွီဒီယို
ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု တန်ဘိုး
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ် သူဦးရေ
( ခ) အခြေခံပညာ
(င) ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ ကျောင်းအပ်နှံမှု
(ဆ) စာတတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
(ဇ) သင်ကြားမှု သင်ယူမှုအထောက်အကူပြုစာသင် ခန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်မှု
( က) ဆေးရုံများ
( ခ) ဆေးပေးခန်းများ
(င) ဒေသတွင်း အများဆုံးဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
( စ) HIV/ AIDS-ရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံးဦးရေ
( ဆ) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ
(ခ) NGO (ဦးရေ)
( ခ) အစိုးရနှင့်ပြည်သူမှဆောင်ရွက်သည့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
ပုဂံ​ခေတ် ဓမ္မရာဇိကဘုရား​ကျောက်စာ၊ ထားဝယ် မြို့နယ် ရှင်မုတ္ထီး​ကျေးရွာမှသံဗျင်၊ ဘနန္ဒ​ဇေယျဘိကြာန်၊ သံဗျင်ယိခိ၊ သံဗျင် ပျွမ်း တို့၏ အုတ်ခွက်ဘုရားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇဝင်ရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း၊ယိုးဒယားရာဇဝင် အ​ခြေပြ မြန်မာနိုင်ငံ​ရေးသမိုင်းနှင့််အခြား​သော စာ​ပေရပ်များအရ ထားဝယ်မြို့နယ်သည် ထားဝယ်တို့ နောက်ဆုံးတည်ခဲ့​​သော မြို့ဖြစ်​ကြောင်း သိရပါသည်။ ထားဝယ်တို့သည် ထားဝယ်​ဒေသတွင် မြို့​​ဟောင်းများ တည်​ထောင်ခဲ့ကြပြီး နှစ်ပေါင်း (၉၀၀)အတွင်း တစ်​နေရာမှ တစ်​နေရာသို့​​ ပြောင်း​ရွှေ့အ​ခြေစိုက်ခဲ့ရပါသည်။ ထားဝယ်ရာဇဝင် များနှင့်် ရှေ့မှီ​နောက်မှီ လူကြီးသူမများ၏ အဆိုများအရ ထားဝယ်​ဒေသ အတွင်း မြို့​​ဟောင်း​ပေါင်း (၁၄) ခုကိုတည်​ထောင်ခဲ့ကြပြီး ထားဝယ်မြို့​ဟောင်းများ၏ ကျုံးနှင့်် မြို့ရိုးများမှာ ယ​​​​နေ့တိုင်ရှိကာ အထင်ရှားဆုံးမှာ ရှင်မုတ္ထီး​ကျေးရွာရှိ မုတ္တသုခ (ခ) မုတ္ထီမြို့​ဟောင်းများ၏ မြို့များဖြစ်ပါ သည်။ ရှင်မုတ္ထီး​ကျေးရွာတွင် ထားဝယ်မြို့စားများဖြစ်​သော သံဗျင်အနန္ဒ​​ ဇေယျသိကြာန်၊သံဗျင်ယိခိနှင့််သံဗျင်ပျွမ်းတို့ထွင်းလုပ်ထား​သောအုတ်ခွက် ဘုရားများက ထားဝယ် အမည်ဖြင့်် မြို့တည်​ထောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်် မုတ္ထီး မြို့သည် အင်းဝနှင့််​ ခေတ်ပြိုင်တည်ရှိ​သော မြို့ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ သက်​သေခံလျက်ရှိ ပါသည်။
၄။ ထားဝယ်မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေဖြူမြို့နယ်၊ အရှေ့ ဘက်တွင် မေတ္တာမြို့၊ တောင်ဘက်တွင် သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ အနောက် ဘက်တွင် လောင်းလုံးမြို့နယ်တို့ဖြင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။